Forex MetaTrader 4 Broker, MetaTrader 4 Trading, MT4 Macaamiisha Macaamiisha
Home / Ajandooyinka / PC / MT4 loogu talagalay PC
MetaTrader 4 waa mid ka mid ah meheradaha ugu caansan ee ganacsiga aduunka ee maanta. Dhamaan qalabka ganacsi ee lagama maarmaanka ah iyo ilaha dhaqaalaha ayaa ku yaal gacanta si ay ganacsatada u oggolaadaan in ay sameeyaan cilmi baaris iyo falanqeyn, galaan tiknoolajiyada iyo xitaa isticmaalaan barnaamijka ganacsiga ganacsiga ee saddexaad ee is-dhaafsiiya (Lataliyayaasha Khabiirada ama EA-yada). Ma ku faraxsan tahay ganacsiga laga helo EA? MetaTrader waxay isticmaashaa luuqadeeda barnaamijka u gaarka ah MQL4, taas oo kuu ogolaanaysa inaad barnaamij ka dhigto robotada ganacsiga ee baabuurta leh.
Software-ka MetaTrader 4 Broker waxay bixisaa qalab aad u falanqayn leh. Saacadaha sagaalaad ayaa loo heli karaa qalab kasta oo maaliyadeed. Kuwani waxay bixiyaan falanqayn faahfaahsan oo ku saabsan dynamics xigasho Maktabad dhisme ah oo ka badan tilmaanta 50 iyo qalabka ayaa dejiya nidaamka falanqaynta, taas oo u sahli karta ganacsatada in ay aqoonsadaan isbeddellada, qeexaan qaababka suuqyada kala duwan, go'aaminta goobaha gelitaanka iyo ka bixitaanka, jaantuska jaantuska qalab kasta oo ay ku sameeyaan falanqaynta "waraaqaha".
MetaTrader 4 waxaa ku jira dhammaan hawlaha ganacsiga ee ganacsade badanaaba u baahan yahay. Amarada suuqyada, amarada sugitaanka iyo joojinta, joojinta joojinta - dhamaantood waa saxan yihiin farahaaga oo leh MT4.
Moobiilku wuxuu u oggol yahay amarro in lagu dhejiyo siyaabo kala duwan, oo ay ku jiraan ganacsiga si toos ah uga soo jeeda jaantusyada. Jaantusyada saxda ah ee la dhigo ayaa ah hab aad u faa'iido leh oo lagu go'aamiyo qodobada saxda ah ee loo soo galo iyo ka bixitaanka.
MetaTrader 4 waxaa ku jira digniino ganacsi, qalab wax ku ool ah oo kaa caawin kara inaad la socoto jawiga ganacsiga ugu fiican iyo xaaladaha suuqa. Iyada oo la adeegsanayo ganacsiga FXCC MT4 ee aad ku talagashay, dhammaan tamartaada waxaa lagu soo bandhigi karaa fulinta istaraatijiyadaada ganacsiga, ku sugnaanta aqoonta in qalabka qalabka ee MT4 ay ku jiraan si aad dib ugu noqoto.
Sida dhaqdhaqaaqa dhaqaale kasta, nabadgelyada macluumaadka lagu gudbiyo waa mid muhiim ah. Barnaamijka MetaTrader MetaTrader 4 Broker wuxuu macluumaadka u gudbiyaa suuqyada ku yaala 128-bit encrypted connections. Tani waxay u taagan tahay si loo hubiyo ammaanka dhammaan xirfadahaaga. Intaas waxaa dheer, FXCC waxay sidoo kale bixisaa suurtogalnimada in la isticmaalo algorithmka sugnaanta ammaanka ee Aqoonsiga Furaha Dadweynaha. Xogta la hubiyay ee noocan ah waa wax aan macquul ahayn in lagu tiriyo waqti kasta oo gaaban.
MetaTrader 4 waxaa ka mid ah waxqabadyo fudud oo si fudud loo fahmi karo, markaa waxay qaadaneysaa daqiiqado yar oo keliya si aad ugu raaxaysato dhammaan fursadaha kala duwan ee aad heli kartid sida ganacsade. Moobiilku wuxuu leeyahay "Help" oo la dhisay, si aad u hesho jawaabaha su'aalaha caadiga ah ee tooska ah ee softwareka laftiisa, sidaas darteed waxaad xoogga saari kartaa waxyaabaha muhiimka ah - ganacsiga.
Xaalad kasta, haddii mashruuca gargaarka MT4 uusan ka jawaabi karin su'aashaada, shaqaalaha FXCC waxay taageeri karaan.
Mashruuca ganacsiga MetaTrader 4 wuxuu la yimaadaa luuqadkiisa oo dhan si loogu isticmaalo istaraatiijiyada ganacsiga ee barnaamijka. MQL4 wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto EA (La-taliyaha Khabiir) (Self Advising Advisor) iyo inaad baabuurto ganacsigaaga iyadoo lagu saleynayo istaraatijiyadda barnaamijka kuu gaarka ah. Isticmaalka MQL4 waxaad kari kartaa kambiyuutarkaaga gaarka ah ee tilmaamayaasha gaarka ah, qoraallada iyo macluumaadka shaqada. Iyadoo la tixgelinayo sumcadda Forex MetaTrader 4 Broker, tiro badan oo ka mid ah forumyada iyo bulshooyinka internetka ayaa kor u kacay, halkaasoo isticmaaluhu isticmaali karo fikradaha iyo istiraatiijiyadaha lagu helayo inta badan barnaamijka MQL4 programming iyo MetaTrader 4 guud ahaan.
Lataliyaha khabiir waa nidaam farsamo farsamo (MTS) oo ku xiran meelaha qaarkood. La-taliyayaashu ma aha oo kaliya inay kuu sheegi karaan suurtagalnimada inaad gasho ganacsiyada, laakiin sidoo kale waxay sameeyaan heshiisyo ku saabsan akoonnada ganacsiga si toos ah uguna toosiyaan shaqaalaha ganacsiga. Sida nidaamyada ganacsiga badankooda, MetaTrader 4 Trading Station waxay taageertaa istaraatiijiyado tijaabo ah oo ku saabsan xogta taariikhda leh qaababka garaafka ah ee gelitaanka ganacsiga iyo meelaha laga baxo.
Muujiyeyaasha gaarka ah Miyay MetaTrader 4 ay ku qaadataa tusayaal farsamo. Muujiyeyaasha Gaarka ah waxay u ogolyihiin abuurista tusmooyinka marka lagu daro kuwa horayba loogu dhexgeliyay terminal MetaTrader 4. Sida muuqaallada la dhisay oo horey u soo dhigtay MT4, tilmaamayaasha gaarka ah waxaa loogu talagalay falanqaynta farsamada oo aan awoodin in ay si toos ah u furaan ama u xiraan xirfadaha.
Scripts waa barnaamijyo loogu talagalay fulinta hal keli ah falalka qaar. Si ka duwan Lataliyeyaasha Khabiirada, Scripts ma ahan kuwo sax ah oo aan sax aheyn oo aan laheyn hawlaha tilmaamaya.
Maktabadaha waa macmiilo shaqaale isticmaala oo ah inta badan isticmaalka nambarka MQL4 lagu kaydiyo. Marka barnaamijyada istaraatijiyad gaar ah ama EA ah ee MQL4, isticmaalayaashu waxay ka soo qaadan karaan maktabadaha koodhadhka waxayna ku darsadaan shaqooyinka kaydka ah ee ay u leeyihiin robots cusub.